IAmazon Pay ifika eSpain: I-Apple Pay ekwi-Intanethi inokhuphiswano | Ndisuka mac
I-Amazon Pay ifika eSpain: I-Apple Pay kwi-Intanethi inokhuphiswano
Mva nje, Zininzi iindlela ezikhoyo zokuhlawula kwi-intanethi ukuze uthenge ngokukhuselekileyo, ngaphandle kwesidingo sokongeza ikhadi lethu letyala okanye ledebhithi nakweliphi na iphepha lewebhu apho sifumana into esiyithandayo. Nangona Paypal yayiyeyona ine-scoop (inkampani eyenziwe ngokudibeneyo ngu uElon Musk, kanye CEO yeTesla Motors, phakathi kwezinye), kwaye eyona ibiphumelele kakhulu, namhlanje uninzi lwetekhnoloji entsha ithatha indawo yayo kwintengiso.
Ngapha koko, kutshanje sazi iindlela zokuhlawula ezinje Samsung Pay okanye i-Apple Pay uqobo. Nangona ezi zixhobo zisivumela ukuba sihlawule nakweyiphi na ivenkile ebonakalayo (kwaye apho ukhuphiswano lwabo oluphambili ngamakhadi enjalo) Bayasivumela ukuba senze iintlawulo nge-intanethi kula maphepha anikezelweyo. Ewe, kulapho ke ukhuphiswano luqala khona Amazon Pay.
Ngapha koko, kukho ukhuphiswano ngenxa yokusebenza kwayo okulula. Ukuba unayo iakhawunti yeAmazon, sele unayo inkonzo iyasebenza Amazon Pay, njalo ngekhe wenze naluphi na uqwalaselo olongezelelweyo ukuze usebenze kwaye usebenze. Le ndlela intsha yokuhlawula iqala ukusebenza njengangoku eSpain.
Inkonzo, yintoni yayisele ikhona kumazwe angaphezu kwe-170 enabasebenzisi abangaphezulu kwezigidi ezingama-30, ithiwe thaca njengenye indlela ekwi-intanethi “kwiindlela eziqhelekileyo” ezinje I-Paypal Apho u-Apple Pay wayefuna ukufumana indawo, iAmazon Pay iza ukongeza ukhuphiswano.
Isaswele loo nto, njengakwi-Apple Pay, Elinye lamaphepha apho iintlawulo ze-Intanethi zivunyelweyo yamkela le ndlela yokuhlawula. Nangona kunjalo, kulula kwezi webhusayithi ukuvumela intlawulo ngeAmazon Pay, kuba ayikhawulelwanga kubasebenzisi bohlobo oluthile lwentengiso, kananjalo uninzi lwabo luqinisekile ukuba iinkonzo zabo bazisekela kwiphepha elidumileyo lokuthengisa.
Amazon isungule iwebhusayithi apho iqinisekisa ukhuseleko oluphezulu ukuba le nkonzo intsha iqinisekisa, kubonisa ukuba kuphela kwedatha ababelana ngayo nabathengisi iya kuba ligama lomthengi kunye nedilesi yokuthumela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Amazon Pay ifika eSpain: I-Apple Pay kwi-Intanethi inokhuphiswano
Iyafumaneka kwakhona i-beta yesithathu ye-watchOS 3.2.2 yabaphuhlisi
Imali Pro -Izimali zobuqu, ziphinde zathengiswa okwexeshana